QuickTime bụ a eluigwe na ala mgbasa ozi ọkpụkpọ na-eme ihe niile mara mma ọma ma e wezụga eke listi ọkpụkpọ. Ọ bụ dịtụ nke a bummer na-aghọta na ọ bụ ezie na QuickTime bụ a ọkaibe ngwa, ọ nwere ike adịghị akwado ihe dị mfe dị eke listi ọkpụkpọ. Nke ahụ bụ ihe mere kasị folks atụgharị iTunes bụrụ na ha chọrọ ịmepụta listi ọkpụkpọ n'ihi na ha na fim.
E nwere otu ọzọ ezie na, na na na-eji Playlist Lite, nke bụ a free ngwa n'ihi na Mac na-enye ohere maka e kere eke nke listi ọkpụkpọ na ike ga-eji site ma QuickTime na iTunes. Ebe ọ bụ na ọ bụ 'Lite' version nke ngwa, dị ka aha n'ụzọ doro anya na-egosi, ọ bụ naanị na-enye ohere na-agbakwunye a kacha nke 10 ihe na playlist. O sina dị, a oké nhọrọ maka onye ọ bụla chọrọ a playlist na ha QuickTime ọkpụkpọ.
Ka anyị na-anya na nke a na ngwa ugbu a na-ahụ otú iji ya.
Part 1: Olee ka a QuickTime playlist on Mac
Nkebi nke 2: Olee otú ike a playlist na QuickTime ọkpụkpọ maka ọtụtụ faịlụ dị iche iche subfolders
Nkebi nke 3: Olee otú iji akaghị a QuickTime playlist
Nzọụkwụ 1: Pịa ebe a ibudata na wụnye ngwa Playlist Lite na gị na kọmputa.
Nzọụkwụ 2: Mgbe ị ọma arụnyere ngwa, ẹkedori ya. Ị ga-ahụ na interface nke ngwa nwere 2 ogwe; 1st panel yiri ọkpụkpọ akara na mpaghara na-buttons ahụ yiri ihe ndị ị ga-ahụ na iTunes. Ị ga-ahụkwa aghụghọ dị iche iche dị ka n'ọnọdu nke akaghị na ịkpọgharịa buttons nke na-nyere na ala nke ngwa, n'adịghị na iTunes. The 2nd panel enye abụọ collapsible anatara - 'Playlist' nke ga-ebu playlist ị ga-ike nke QuickTime, ma 'na iTunes' na e dere ihe listi ọkpụkpọ maka iTunes.
Nzọụkwụ 3: Ị ga-ahụkwa na na ala, e nwere 4 iche buttons. Iji ịgbakwunye ihe otu dị na playlist ma ọ bụ na-eke ọhụrụ otu, i nwere ịhọrọ bọtịnụ na anya dị ka a gbakwunyere ịrịba ama.
Nzọụkwụ 4: Mgbe ị pịrị na gbakwunyere ịrịba ama, ị nwere ike ma na-aga Ndetuta egwu ọkpụkpọ> Tinye Playlist ike ọhụrụ playlist ma ọ bụ nanị họrọ na ẹdude playlist na mgbe ahụ họrọ nhọrọ nke 'Tinye Files' ịgbakwunye ya. Dị na-echeta na n'agbanyeghị ihe nhọrọ ị na-ahọrọ, ị ga na-enwe ike tinye 10 ihe na ndepụta na kasị.
Nzọụkwụ 1: Mwepụta QuickTime si gị omume menu.
Nzọụkwụ 2: Ugbu a, gaa File> Export si menu mmanya nyere n'elu ihuenyo.
Nzọụkwụ 3: Nke a kwesịrị ugbu a na-emeghe ọhụrụ popup window maka gị. Site dobe ala menu maka Export, họrọ nhọrọ nke 'Movie ka QuickTime Media Link' wee pịa bọtịnụ 'Nhọrọ' bụ nke a nri na-esote ya.
Nzọụkwụ 4: Ozugbo ị pịa na 'Nhọrọ' button, ọ ga-emeghe QuickTime Media Link Ntọala mkparịta ụka gị (ịhụ screenshot dị ka e n'okpuru).
a Nzọụkwụ 5: Ị ga-ahụ na kwajuru nkiri a na-ama na-atụgharị uche nkiri URL ụzọ. Ugbu a, tinye otu ihe isi na ụzọ ndị clip na iji 'QT Next URL' ubi wee pịa OK.
Nzọụkwụ 6: Ị ga-ahụ ugbu a na Obere vidiyo ga-akpọ ya anọchie.
Iji ike a akaghị maka gị playlist on QuickTime, ị nanị nwere eso ndị a.
Nzọụkwụ 1: Mwepụta QuickTime, site Malite bọtịnụ (Windows) ma ọ bụ Finder (Mac) na mgbe ahụ gaa Njikwa> Open imeghe video ị ga-achọ na-ekiri.
Nzọụkwụ 2: Ugbu a, họrọ nhọrọ 'View' site menu mmanya n'elu nke QuickTime ọkpụkpọ window na pịa on 'Loop'.
Nzọụkwụ 3: Ọ bụ ya, na i tinyeworị mere ihe ị na-aghaghị. Ugbu a, nanị na-aga n'ihu na-egwu clip ma ọ bụ video na ọ ga-arụ nke a akaghị ie nọgidere maka gị.
> Resource> QuickTime> 3 Atụmatụ maka QuickTime playlist i nwere mara